Kumanaan Reer Somaliland oo Heli Doona Sharciga Degaanka Somalida Ethiopia. – Rasaasa News
Kumanaan Reer Somaliland oo Heli Doona Sharciga Degaanka Somalida Ethiopia.
Oct 15, 2011 Kumanaan Reer Somaliland oo Heli Doona Sharciga Degaanka Somalida Ethiopia.
Ugu yaraan 60, 000 oo ruux ayaa dhawaan iska diiwaan galiyey magaalada Hargeysa ee maamul gabaleedka Somaliland, dadkaas oo sheegtay in ay yihiin Ethiopian, asal ahaana ka soo jeedaan degaanka Somalida Ethiopia.
Tan iyo intii uu ururka ONLF/Somali galbeed heshiiska la galay dawlada Ethiopia waxaa daafaha aduunka iska abaabulay jaaliyado hore uga xishoon jiray in ay sheegtaan Ethiopia iyo degaanka Somalida midna.
Talaabooyinka is muujinta Jaaliyadaha waxaa dhiiri galiyey masuuliyiinta dawlada degaanka Somalida Ethiopia oo gaadhsiiyey meel walba oo ay joogaan Jaaliyaadku warna galiyey isbadalka siyaasadeed iyo bulsho ee ka jira degaanka.
Kumanaan dad ah ayaa ku qamaamay safaaradaha Ethiopia iyaga oo sheeganaya in ay yihiin Ethiopian. Waxaa xaqiiq ah in dadweynaha Somalida Ethiopia [ogaden] ayna hore u qaadan jirin warqada dhalashada ee Ethiopia sabab keentayba.
Mahadi ha ka gaadhee masuuliyiinta dawlada degaanka Somalida ayaa ka codsatay dawlada wadaaga Ethiopia in ay u fududayso Jaaliyaadka Somalida in ay iska diiwaan galiyaan meel kasta oo ay joogaan lana soo dhaweeyo.
Hadaba is diiwaan galintii Jaliyadaha degaanka Somalida Ethiopia ee dibadaha ayaa ka bilowday dalalka dariska. Somaliland ayay iska diiwaan galisay tirada ugu badan Jaaliyaadka degaanka Somalida Ethiopia. Waxaa dhawaan laga diiwaan galiyey magaalada Hargeysa in ka badan 80, 000 oo ruux.
Degaanka Somalida Ethiopia ayaa xad dheer la wadaaga dalka Somaliya, waana dhab in dadka ku nool degaanada xadka ah ay haysan karaan dhalashada Somaliya iyo Ethiopia.
Degmooyinka xiga dhinaca xadka dalka Somaliya ayey hayada tira koobka Ethiopia ayey diiwaanka galisay in ay ka tiro badan yihiin degmooyinka ku yaal dalka gudihiisa. Taas oo loo micnayn karo in dadka ku nool degaanada xadka ay labada dalba tirada u buuxiyaan, kolka ay timaado cod bixin.
Hore ayey dawlada degaanku u qabtay masuuliyiin Somaliland oo abaabul doorasho ka samaynaya degaano ka tirsan gabalka Ogaden xiligii ay doorashadu ka jirtay maamulka Somaliland. Waxaa kale oo la qabtay dad degaanka ah oo haysta warqadihii cod bixinta Somaliland.
Waxaa dhawaan booqasho ku tagay Hargeysa masuuliyiin ka tirsan degaanka Somalida Ethiopia, waxayna kulan kula qaateen Hargeysa Jaaliyad aad u tiro badan oo degaanka ah. Waxayna jaaliyadu ka codsatay masuuliyiinta in la diiwaan galiyo si ay u helaan dhalashada Ethiopia iyada oo aan wax shardi ah lagu xidhin. Dadkaas 95% wax lagu aqoonsado in ay Ethiopian yihiin ma haystaan, hadana waxay sheeganayaan Ethiopia.
Sida la sheegay shirka ay madaxda degaanku ku qabteen Hargeysa waxaa fadhiyey masuuliyiin Somaliland ah, oo uu ka mid yahay gudoomiyaha ururka UCID Faysal Waraabe.
Jaaliyada tirada badan ee ku nool dhinaca Somaliland, ayaa intooda badan waxay u shaqeeyaan maamulka Somaliland, waxayna wada haystaan warqadaha dhalashada Somaliya.
Waxaa sanad walba waxbarashada Ethiopia dhamaysta arday ka timaada degmooyinka xadka xiga, kolka ay waxbarashada dhamaystaana waxay u shaqo tagaan Somaliland iyo Puntland iyaga oo sheeganaya labadaas maamul. Arintan ayaa dhibaato dhaqaale u leh degaanka Somalida Ethiopia, oo sanad walba soo saara arday uu degaanku dhaqaale xoog leh ku bixiya ayay cid kale ka faa,iidaysataa.
R/wasaaraha Somaliya oo Addis Ababa ay Casho ugu Sameeyeen Masuuliyiin Somali ah.
Kenya oo Sheegtay in ay Dagaal ku Qaadayso Somaliya